मधुमेहबाट बच्च चाहनुहुन्छ ? जान्नुस् ,बिरामीले के खाने ?के नखाने ? – Medianp
मधुमेहबाट बच्च चाहनुहुन्छ ? जान्नुस् ,बिरामीले के खाने ?के नखाने ?
Media NPप्रकाशित मिति: शुक्रबार, चैत ०१, २०७५१७:४९
काठमाडौ । मधुमेह रोगलाई सामान्य भाषामा चिनीको रोग भन्ने गरिन्छ । त्यस्तै कसैले यसलाई डाइबेटिस पनि भन्दछन् । रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढि भएपछि हुने रोग नै मधुमेह हो । प्यांक्रियाज नामक ग्रन्थिबाट उत्पादन भई इन्सुलिन हर्मोनको अनियमितता हुदा मधुमेह हुन सक्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालकी पोषणविद् नानीशोभा शाक्यले मधुमेहका रोगीले के खाने र के नखाने भन्ने विषयमा बताएकी छिन् । हेर्नुस्
-पहिलो मधुमेहका बिरामीले सबै प्रकारको खानेकुराको सन्तुलन मिलाएर उमेर र शारीरिक संरचना अनुसार खानु पर्छ । तर बिरामीले भात कम खाने बहानामा अन्य अन्न तथा कार्बोहाइड्रेट खाने चलन पनि छ । यसो गर्नु गलत हो ।
-दोस्रोमा प्रोटिनयुक्त खानेकुराको मात्रा, नजम्ने प्रकारका चिल्लो पदार्थबाट बनेका खानाहरू, खनिज तथा भिटामिनयुक्त खानाहरू खानु पर्छ । तर बढी चिल्लो र गुलियो खानेकुराहरू भुलेर पनि खानु हुँदैन । त्यसमा यदि आलु, पिँडालु, सखरखण्डजस्ता खानेकुरा खानु परेमा भात, रोटी खानु हुँदैन ।तर वृद्ध उमेर भएका मधुमेहका रोगीले भने सबै थरिका खाना कम मात्रामा खान राम्रो हुन्छ । त्यसैले खानाको सन्तुलन मिलाउनु जरुरी छ ।
मधुमेहको उपचार सम्भव छैन । यो रोगको व्यवस्थापन भनेकै रगतमा भएको चिनिको मात्रा घटाउनु हो र रक्तकोशमा क्षति पुराउने अन्य तत्वको निवारण गर्नु हो । त्यसको लागि यी उपाय अपनाउनुस् ।
-पहिलो ग्लुकोजको मात्रा नियन्त्रण गर्न अस्पतालमा उपचार गरी खोपमार्फत नियमित इन्सुलिन लिने गनुपर्छ ।
-दोस्रो शरिरको रक्तचाप नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
-तेस्रोमा सन्तुलित र नियमित भोजन गरी बढि कार्वोहाइड्रेट भएका खानेकुराको खानु हुदैन् ।
-चौथोमा धुम्रपान , मध्यपान बढि चिल्लो पदार्थ भएको खाने कुरा खानु हुदैन् ।
-र पाचौमा नियमित आधा घण्टा व्यायाम गर्नुपर्छ ।
मुलासँगै यी चीज भुलेर पनि नखानुहोस्, जसले तपाईको जिन्दगी नै बर्बाद पार्छ
‘जति थोरै सुतिन्छ, उति छिटो मरिन्छ’